South Korea inosiya Windows yoenda kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Aya nhau anoita kunge ekare, asi handizvo. Kana kwete zvakazara. Mwedzi yapfuura, South Korea yakafambisa zvirongwa zvayo zvekusiya Windows. Gare gare, dzimwe nyikaSaRussia neChina, vakabvumirana uye vakavimbisa kuita zvakafanana. Muzviitiko zvese izvi zvitatu, nzvimbo yakasarudzwa ichave iri Linux uye nguva yekutanga rwendo inoita kunge yasvika, kunyanya mune veKorea. Uye zvikonzero hazvisi kushayikwa.
Kutanga, Windows 7, sisitimu inoshandiswa nezvikwata zvakawanda muSouth Korea, yakamira kupiwa rutsigiro muna Ndira 14. MaKorea vanoda kudzivisa kukwidziridzwa kuWindows 10, izvo zvinozovachengetera mari yakawanda pamalayisensi, uye zvinoenderana zvishoma nekambani yekuAmerica sezvakaita Microsoft. Ichokwadi kuti ruzivo urwu ndirwo rwepamutemo vhezheni uye kuti panogona kuve nezvimwe zvikonzero zvavasingatiudze, kunyangwe tichigona kuzvifungidzira.
South Korea ichapedzisa danho rayo kuenda kuLinux muna 2026
Zvinoita kunge, South Korea inoda kuti kutama kwayo kuzere kuLinux kuitwe mu 2026, gore umo Linux inofanirwa kufambisa makomputa ese munyika ayo anoshandiswa kuwana iyo Internet. Kana panguva iyoyo kuchine mudziyo unoshandisa Windows, unofanirwa kuitwa uri wega, pasina kubatana neinternet uye netiweki dzemuno.
Iyo inoshanda sisitimu iyo yavanotanga kushandisa iri TMaxOS, kugoverwa kweSouth Korea kwakagadzirwa nekambani TmaxSoft. Izvi zvinopa hurumende kutonga, nekuti hwaro hwesoftware yayo ichagadziriswa munyika imwechete. Kune rimwe divi, yakawanda software inowanikwa muLinux ndeye yakavhurwa sosi, saka ivo vanogona kutora kodhi uye voishandura kuti vaishandise sezvavanoona zvakakodzera.
Na Microsoft, kurasikirwa nevatengi kunogara kuri nhau dzakaipa, asi chaive chinhu chavaigona kutarisira nekusiya rutsigiro rwechirongwa chekushandisa senge Windows 7. Chero zvazvingaitika, Satya Nadella neake vari kutaura nehurumende yeSouth Korea, saka nhanho kubva kuWindows 7 kuLinux inogona kumisikidzwa kana kutonhorwa nechando. Tichaona kuti zvinopera sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Imwe imwe: South Korea inosiya Windows uye inoshandura kuLinux
Hazvishamise ... Pane ku "masoch" kugadzirisa kuWindows 10. Bugs, zvikanganiso, kukundikana nekuvandudzwa, kunonoka ... Chero Gnu / Linux distro, inodya ane masimbaose Windows 10 mupenyu. Chii chakashata d Inoshanda system. Kwakaipa nechishuwo ...
Pakupera kwezvose, Windows 10 ndiko chete kudzoka kweMicrosoft kuWindows 7, iyo chete sisitimu yekushandisa iyo yakaburitsa mhedzisiro kubva pane zvese zvavakagadzira uye nezvavanoda kugadzirisa tsvina yese yavakaita. Masisitimu anoshanda akagadzirirwa chete kuti asimbise kutengesa kwevanogadzira Hardware uye kwete kwekugutsikana kwemushandisi wekupedzisira. Kunyangwe vagadziri vakanganiswawo semhedzisiro yematambudziko mazhinji neaya anonzi "maapdate" uye kuti yakangokwanisa kusiira mavhezheni mazhinji echinyakare uye anonetsa eWin 10 munzira, kupatsanurwa kunowedzera zuva nezuva uye haina mhinduro-yenguva pfupi inoonekwa yeiyi pane kumanikidza vashandisi (malware).
Ndinovimba South Korea haiteerere nziyo dze siren uye inomhanyisa kutama kwavo kuenda kuGNU / Linux, nechinhu chakagadzirwa navo kana kumwe kugoverwa kwezvakawanda zvakavakodzera uye chero imwe hurumende inoda kukwakuka.
Ini pachangu ndakaedza Astralinux Orel Common Edition, yakagadzirwa muRussia naRusBitech, yakavakirwa paDebian uye yakanaka, inoshanda zvisingaenzaniswi uye kuti ndinoshandisa kudzidza chiRussia.
Russian zvakare Alt Linux 9 yakavakirwa paMandrake.
Hapana kana mumwe wavo anofanira kushuvira chero chinhu kuWindows !!….
Waigona kuzviona zvichiuya. Chinhu chega chinoponesa Microsoft ndechekuti mazhinji emitambo uye zvirongwa zvekugadzirisa vhidhiyo hazvimhanye paLinux.
Asi munguva pfupi iri kutevera mukana iwoyo unonyangarika.
Tichaona. Chimwe chinhu chakafanana chakaitika neMunich. Vakange vatora Linux muna 2004 uye vakagara vakadaro kwemakore gumi. Kusvika zviremera zvachinja, M $ yakavaisira mari uye kutaurirana kwakamiswa: Zvikonzero zvakatanga zvekuti hutongi hweveruzhinji hauna kuwirirana neLinux uye zvidzidzo zvisina musoro izvo "zvakapedzisa" "kukwirira" kwemhepo * ws. Nhasi mhepo * ws yadzokera kumasystem avo.
Izvo zvakaringana kuti M $ tsvaga akaora vakuru (s) makiyi (s) muna C. del S. uye mhepo * ws ichadzoka mumasisitimu avo.
Hapana chinhu chitsva pasi pezuva.